Gaunbeshi Reporter, Author at Gaunbeshi - Page 27 of 29
काठमाडौं- सन् २०२२ का लागि डाइभर्सिटी भिसा (डीभी)को आवेदन खुला भएको छ । नेपाली समयअनुसार बुधबार राति पौने १० बजेबाट डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) को आवेदन खुला भएको हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार डीभीको फारम भर्ने अन्तिम मिति २०७७ कात्तिक २५ गते (नोभेम्बर १०) सम्म तोकिएको छ। डीभीको आवेदन निःशुल्क आफैंले भर्न सकिने दूतावासले […]
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:३१ Author Gaunbeshi Reporter Comment(0)
कोरोना भाइरसको चुनौती हामी माझ यसकारले पनि छ किनकी यसको लक्षण सहजै थाहा पाउन सकिदैन । कोरोनाको लक्षण रुघाखोकि र ज्वरोको लक्षणसंग मिल्दो हुन्छ । कोरोनाको बिरामीले आफु संक्रमित रहेको तबमात्र थाहा पाउछन् जब एकसाथ धेरै लक्षणले शरीरलाई गाजेको हुन्छ । त्यसैले आजहामी तपाईंलाई कोरोना संक्रमणको प्राथमिक लक्षणबारे जानकारी दिदैछौं । १. शुरुमा ज्वरो […]
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:२९ Author Gaunbeshi Reporter Comment(0)
बलेवा, असोज २२ । विद्यालय हिँडेकी बालिका अपहरण गर्ने दुई जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले पक्राउ गरेको छ । काठेखोला गाउँपालिका–६ की एक बालिकालाई गत मङ्गलबार जबरजस्ती मोटरसाइकलमा राखी अपहरण गरेको आरोपमा सोही ठाउँका दुई युवा पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले बुधबार साँझ १९ वर्षीय प्रेम परियार र २४ वर्षीय सुन्दर बिकलाई पक्राउ गरेको छ […]
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:२६ Author Gaunbeshi Reporter Comment(0)
सडक दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएपछि चालकको पसलमा आगजनी
जाजरकोट, असोज २२ । जुनिचाँदे गाउँपालिका–१ औलमा बुधबार बेलुकी भे १ ज ९३५ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा छ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा वडा नं ११ का वडाध्यक्ष ५० वर्षीय अमरबहादुर शाही, ६० वर्षीया कृति शाही, ३२ वर्षीय खेमबहादुर शाही, वडा नं ५ की ३० वर्षीया मालिका बस्नेत, २९ वर्षीय कृष्णबहादुर शाही र […]
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:२१ Author Gaunbeshi Reporter Comment(0)
हुम्ला, असोज २२ । हराएको चार वर्षपछि चन्दननाथ मन्दिरबाट चोरी भएको एक थान बहुमूल्य दाहीने शङ्ख भेटिएको छ । विसं २०७३ मङ्सिर ११ गते चोरी भएका मूर्तिको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले दाहीने शङ्ख भेटाएको हो । तीन दिन अघि दुई थान मूर्तिसहित पक्राउ परेका तीन आरोपितको सहयोगमा बुधबार चन्दननाथ नगरपालिका १० बोहोरागाउँ जुम्लाको खोलापानेस्थित एक ओडारमुनि […]
‘यो क्षेत्रीको वचन हो, प्राण जाओस्, वचन नजाओस्, मैले झुटो बोलेको रहेछु भने, सबै अवार्ड फिर्ता गर्छु’ : अभिनेत्री कंगना
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौत अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत केसमा पहिल्यैबाट उनको मृत्युको पछाडि अवश्य नै कसैको हात रहेको बताउँदै आएकी छन् । उनले जस्टिस फर सुशान्त क्याम्पनलाई मज्जाले समर्थन गर्दै आएकी छन् । साथै उनले यो केस लामो समयसम्म आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै आईरहेकी छन् । अब सुशान्त केसमा हत्याको एंगल्स खारेज […]
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:१८ Author Gaunbeshi Reporter Comment(0)
सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार ९ सय
बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार ९ सयमा कारोबार भइरहेको छ। अघिल्लो दिन सुन २ सय रुपैयाँले बढी थियो। आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला ११ सय ८० रुपैयाँमा कायम रहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज चाँदी प्रतितोला ५ रुपैयाँले बढेको हो। बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस १८ सय ८६ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:१४ Author Gaunbeshi Reporter Comment(0)
काठमाण्डाै – सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी पक्षबीच वार्ता सुरु भएको छ । हिजो सरकार र डाक्टर केसी पक्षले वार्ता टोली गठन गरेलगत्तै अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता सुरु भएको हो । डाक्टर केसीसँग वार्ताको लागि सरकारले शिक्षा सचिव मैनालीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-सचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डाक्टर दिलीप शर्मा सदस्यीय […]
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:१३ Author Gaunbeshi Reporter Comment(0)
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको अग्रणी हवाई सेवा प्रदायक संस्था यती एयरलाइन्सले आजदेखि राजधानी काठमाडौँ नजिकको सिमरा गन्तव्यमा उडान शुरु गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो २२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा घोषणा गरेबमोजिम १२ वर्षपछि बाराको सिमरा विमानस्थलमा उडान शुरु गरेको हो । यो यतीको नवौँ र प्रदेश नं २ मा दोस्र्रो गन्तव्य हो । एयरलाइन्सका प्रमुख सुरक्षा अधिकृत […]
Posted on २१ आश्विन २०७७, बुधबार १३:४८ Author Gaunbeshi Reporter Comment(0)
मुम्बई, २१ असोज । बलिउड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीलाई बम्मे हाइकोर्टले धरौटीमा छाडेको छ । अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको मृत्यु प्रकरणमा जोडिएकी चक्रवर्तीलाई यसअघि प्रहरीले लागुऔषध प्रयोग र कारोबारसँग सम्बन्धित भएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । बुधबार उनलाई बम्मे हाइकोर्टले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनीसँगै प्रहरी हिरासतमा रहेका भाइ शौविकलाई पनि धरौटीमा छाड्न दर्ता भएको निवेदनलाई […]
Posted on २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:१७ Author Gaunbeshi Reporter
Posted on २५ आश्विन २०७७, आईतवार १६:३४ Author Gaunbeshi Reporter
Posted on २६ आश्विन २०७७, सोमबार १६:२४ Author Gaunbeshi Reporter
Posted on २ कार्तिक २०७७, आईतवार १३:५२ Author Gaunbeshi Reporter
Posted on २६ आश्विन २०७७, सोमबार १६:०९ Author Gaunbeshi Reporter